सिरका र बेकिंग सोडाबाट हट बर्फ बनाउनुहोस्
हट बर्फ वा सोडियम एसीटेट
सोडियम एसीटेट वा तातो बर्फ एक अद्भुत रसायन हो जुन आफैलाई आफैलाई सोडा र सिरका बाट तयार पार्न सक्नुहुन्छ। तपाईं यसको पिघरे बिन्दुको तल सोडियम एसीटेटको समाधान शांत गर्न सक्नुहुन्छ र त्यसपछि तरल पदार्थलाई क्रिस्टलाइज गर्न सक्नुहुन्छ। क्रिस्टलाइजेशन एक्थोरमिक प्रक्रिया हो, त्यसैले परिणामकारी बर्फ गर्म छ। ठोसताले यति छिटो हुन्छ कि तपाईं मूर्तिकला बनाउन सक्नुहुन्छ किनकि तपाईंले तातो बरफ लगाउनुहुन्छ।
सोडियम एसीटेट वा हट बर्फको सामग्री
1-लीटर स्पष्ट सिरका (कमजोर एसिटिक एसिड)
4 चम्मच बेकिंग सोडा (सोडियम bicarbonate)
सोडियम एसीटेट वा हट बर्फ तयार पार्नुहोस्
एक ससनी वा ठूलो बिकारमा, सिरकामा बेकिंग सोडा थप गर्नुहोस्, एक समयमै थोरै र थपिहरू बीच जोड्न। सोडियम एसीटेट र कार्बन डाइअक्साइड ग्यास बनाउनका लागि पकाउने सोडा र सिरका प्रतिक्रिया। यदि तपाईंले पछाडि बेकिंग सोडा जोड्नु भएन भने, तपाइँले बेकिंग सोडा र सिरका ज्वालामुखी पाउनुहुनेछ, जुन तपाइँको कंटेनर ओभरफ्लो हुनेछ। तपाईंले सोडियम एसीटेट गर्नुभयो, तर यो अति धेरै उपयोगी हुन पतला छ, त्यसैले तपाईंलाई पानी को अधिकांश हटाउनु पर्छ।
यहाँ पकाउने सोडा र सिरका बीच सोडियम एसीटेट उत्पादन गर्न प्रतिक्रिया छ:
समाधान सोडियम एसीटेट ध्यान केन्द्रित गर्नुहोस्। तपाईं समाधान को 100-150 मिलीलीटर बाँकी रहेको एकपटक मात्र समाधान हटाउन सक्नुहुनेछ, तर राम्रो परिणाम प्राप्त गर्न सबै भन्दा सरल तरिका मात्र क्रिस्टल छाला वा फिल्म सतहमा निर्माण गर्न सुरु हुन्छ जब सम्म समाधान उल्टाउन। यसले मलाई मध्यम घण्टामा चोकमा एक घन्टा लिन थाल्यो। यदि तपाईं कम गर्मी प्रयोग गर्नुहुन्छ भने तपाईं पहेंलो वा भूरा तरल प्राप्त गर्न कम सम्भव छ, तर यसले लामो समयसम्म लिनेछ। यदि विचलन हुन्छ, यो ठीक छ।
एकपटक तपाईंले गर्मीबाट सोडियम एसीटेट समाधान हटाउनुभएपछि, तुरुन्तै यो वाष्पीकरणलाई रोक्नको लागि ढाक्नुहोस्। मैले मेरो समाधानलाई एक अलग कन्टेनरमा राखें र प्लास्टिक लपेटोमा राखे। तपाईंसँग तपाइँको समाधानमा कुनै क्रिस्टल छैन। यदि तपाइँसँग क्रिस्टलहरू छन् भने, क्रिस्टल घुमाउन पर्याप्त पर्याप्त मात्रामा पानी वा सिरका समाधानमा हलचल।
फ्रिजमा ठोक्किएर सोडियम एसीटेट समाधानको आवरण कंटेनर राख्नुहोस्।
Hot Ice Involving Activities
फ्रिजमा समाधानमा सोडियम एसीटेट एक supercooled तरल को एक उदाहरण हो । यो, सोडियम एसीटेट यसको सामान्य पट्टि बिन्दु तल तरल फारममा अवस्थित छ। तपाईं सोडियम एसीटेटको सानो क्रिस्टल जोडेर क्रिस्टलाइजेशन प्रारम्भ गर्न सक्नुहुन्छ वा सम्भवतः चम्मच वा औंलाले सोडियम एसीटेट समाधानको सतहलाई स्पर्श गरेर। क्रिस्टलाइजेशन एक्थोरमिक प्रक्रियाको उदाहरण हो। हीट 'बर्फ' रूपको रूपमा रिलीज गरिएको छ। सुपरक्रूलिङ, क्रिस्टेलाइजेशन, र गर्मी रिलीज देखाउन तपाईंले निम्न गर्न सक्नुहुनेछ:
ठुलो सोडियम एसेटनेट समाधानको कंटेनरमा क्रिस्टल छोड्नुहोस्। सोडियम एसीटेट क्रिस्टल थपेर सेकेन्ड भित्र क्रिस्टलाइज गर्नेछ, तपाईले क्रिस्टल थप्नुभयो। तीव्र क्रिस्टल विकासको लागि न्यूनलेशन साइट वा बीउको रूपमा क्रिस्टल कार्य गर्दछ। यद्यपि समाधान भर्खरै फ्रिजबाट बाहिर आइपुगेको छ भने, यदि तपाईँले कन्टेनर छोड्नुभयो भने तपाईले अब पाउनु राम्रो छ वा गरम छ।
समाधानलाई एक सुई डिशमा राख्नुहोस्। यदि तातो बर्फले प्राय: क्रिस्स्टेलाइजेसन सुरू गर्दैन भने, तपाई यसलाई सोडियम एसीटेटको क्रिस्टलको साथ छुनुहोस् (तपाई प्रायः कुन प्रयोग गर्नुभन्दा कंटेनरको छेउबाट सानो मात्रामा सोडियम एसीटेट स्क्रैप गर्न सक्नुहुनेछ)। क्रिस्टलाइजेसन तपाईले तरल फालिदिनु भएको पाईलोबाट प्रगति हुनेछ। तपाईं तातो बर्फको टावरहरू निर्माण गर्न सक्नुहुनेछ। टावरहरू सम्पर्कमा न्यानो हुनेछ।
तपाईं सोडियम एसीटेट पुन: पिउन सक्नुहुन्छ र प्रदर्शनका लागि पुन: प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ।
हट बर्फ सुरक्षा
तपाईं आशा गर्नुहुँदा, सोडियम एसीटेट प्रदर्शनमा प्रयोगको लागि एक सुरक्षित रासायनिक हो। स्वाद बढाउनको लागी खाना थप्न प्रयोग गरिन्छ र धेरै हट प्याकहरूमा सक्रिय रासायनिक हो। प्रशोधन गरिएको सोडियम एसेटटेट समाधानको क्रिस्टलाइजलाइजेसनद्वारा उत्पन्न हुने उर्जा जलाउने खतरा छैन।
तुरुन्तै स्लीसी कसरी गर्ने?
12 औं कक्षा विज्ञान मेला परियोजनाहरु
कसरी नकली ग्लास बनाउने?
कसरी सुत्ने बर्फ बल्बहरू बनाउने
तपाईंको फ्रिजमा कसरी आइस स्पिक्स बनाउने?
विशेष प्रभाव विज्ञान
विज्ञान मेला विचार
बल प्वाइन्ट पेन इंक कसरी हटाउने
JRR Tolkien को बुक हो Hobbit
राम्रो शुक्रबार के हो?
विश्वविद्यालय को बगेट ध्वनि जीपीए, एसएट र एक्टा डेटा
सूची (व्याकरण र वाक्य शैलियां)
अमेरिका पूर्वी सम्मेलन विश्वविद्यालयहरूमा प्रवेशको लागि एसएटी स्कोर
स्टार वार्स शब्दावली: आदेश 66
कसरी डाइविंगमा रिप प्रविष्टि सिर्जना गर्नुहोस्
के 'इ ला मलाई झिल्ली क्यू' उप-प्रोजेक्ट चाहिन्छ?
महिलाहरुको लागि पीईओ अन्तर्राष्ट्रिय छात्रवृत्ति
पूर्व विद्यालय पैटर्न, प्रकार्य र बीजगणनाका लागि IEP गणित लक्ष्यहरू
बालबालिकाको सजावट अधिक अपराधसँग जोडिएको छ
YEAR प्रकार्यसँग एक्सेलमा घटाउनुहोस् मितिहरू
"स्ट्रीटकर नामकरण इच्छा" को सेटिङ अन्वेषण गर्नुहोस्
विज्ञानमा तापमान परिभाषा
व्हील एनाटोमी 301: ओफसेट र ब्याकस्पेसिङ
चिनो आणविक सूत्र
महिलाहरुको लागि उत्तम गोल्फ निर्देशात्मक डीभिडी
नील्स बोहर र द मैनहट्टन परियोजना
यी नयाँ फेयरवे वुड प्लेका लागि तैयार छन्
डोनरसँग फ्रान्सेली अभिव्यक्तिहरू
उज्यालो रेडियो सामग्री
यहूदा इस्लाकार - येशू ख्रीष्टको बेवास्ता